40 guuradii boqorka ee dhaxalka kursiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay fredag 13 september 2013 kl 15.03
Axadda foodda innagu soo heysa ayaa loo dabaal-degi doonaa sannad-guuradii 40-aad oo ka soo wareegtay kolkii uu boqorka dalkan Carl Gustav-kii 16-aad uu la wareegay kursiga dhaxaltooyada boqortooyada. Xafladdan ayaa ku soo beegantay iyada oo ey hoos u sii dhaceeyso taageerada bulshadu ku qabaan iyo dhaleeceeymo dhowaantan loo soo jeediyey ee la xiriira wareeysi ku jees jees ah oo uu siiyey idaacadda la iska waado ee Svt.
Nala dhageeysta xoogaa wareeysiga ay Svt la yeelatay boqorka midkaasina oo la xiriiray kolkii shaaca laga qaaday uurka amiirad Madalene:
- Kolka uu/ay dhalato ilmaha aad awoowaha u tahay gacan ma ka geeysan doontaa xanaanadeeda?
- Aad iyo aad. Shaqada oo dhan ayaan isaga tegin oo ilamaha ayun baan isku mashquulin. Ameerikey deggen tahay gabadhaydu, marka xaggaan u wareegin waa arrin aad u wanaagsan sow maaha.
- Ma laga yaabaa iney dalkan u soo guurto kolka ilmuhu dhashaan?
- Dalka Island ayay u guuri doontaa, halkaa ayaa ka wanaag-san sow maaha, ayuu yiri boqorka oo si kaftan ah uga jawaabayay su'aalo uu weydiiyay waeriye ka socday idaacadda la iska daawado ee Svt. Hase yeeshee dhaleecooyin badan loogu soo jeediyey boqorka.
Carl XVI Gustaf, oo loogu walqaley Carl Gustaf Folke Hubertus, wuxuu ku dhashay qalcadda Haga ee xaafadda Solna 30 abriil 1946 , isagoo la wareegay kursiga dhaxal-tooyada 15-kii bishii sebteember ee sannadkii 1973 oo uu kala wareegay awoowgii Gustaf-kii 6-aad Adolf . Waana boqorkii toddobaad ee reer Bernadotte iyo boqrkii 74-aad ee taariikhda boqortyooyada dalkan. Carl Gustaf waxaa iska dhalay amiir Gustaf Adolf iyo amiirad Sibylla ee Sachsen-Coburg-Gotha. Xilligii uu iskuulka dhiganayay ayaa boqorka mararka qaarkood uu lahaa naanaysta "Tjabo".
Carl Gustaf wuxuu guursaday Silvia Sommerlath 19-kii bishii juun ee sannadkii 1976-kii, oo arooska dabadii loo caleema saaray boqorad Silvia Sommerlath. Laga bilaabo 1981 waxey reer boqor ku dhaqan yihiin qalcadda Drottningholm. Boqorka iyo boqoradda ayaa isku leh saddex caruur ah Victoria , Carl Philip iyo Madeleine Amiirad Victoria, ahna gabadha iska leh kursiga dhaxaltooyada ayaa leh gabar dhowaantan sannad-jirsatay oo loogu magac-darey Estella.